အယဉ်သုံးစကား - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on October 17, 2011 at 16:43 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လူယဉ်ကျေးတို့နေ့စဉ်ပြောဆိုဆက်ဆံကြရာတွင် သုံးစွဲလေ့မရှိသည့်စကားလုံးများစွာရှိပါသည်။ ၄င်းစကားလုံးများကို ကျွန်ုပ်တို့ သိသော်လည်း နှုတ်မှဖွင့်ဟပြောဆိုလျှင်မူ ရိုင်းသည်ဟု ခံစားမိ ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ၄င်းစကားလုံး အစား တခြားစကားလုံးများကို အစားထိုးသုံးစွဲကြပါသည်။ ထိုသို့သုံးစွဲပြောဆိုခြင်းကို euphemism ဟု ခေါ်ပါသည်။
ဆရာကြီး မောင်ခင်မင်(ဓနုဖြူ)ကတော့ euphemism ကို အယဉ်သုံးစကားဟု သုံးစွဲခေါ်ဝေါ်ထား သည်။ ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါသည်။ euphemism ဆိုသည်မှာ နားတွင်ကြား၍ရိုင်းသောစကားကို ယဉ်စေရန်သုံးစွဲသည့် အစားထိုးပုံစံ တစ်မျိုးပင်မဟုတ်ပါလား။
Euphemism isasubstitution for an expression that might offend or suggest something unpleasant to the receiver, using instead an agreeable or less offensive expression, or to make it less troublesome for the speaker.
To make difficult or emotional situations more tolerable:
("the loved one" vs "body," "cadaver," "corpse," etc.)
To deceive (conceal the truth); ("culturally-deprived area" vs "slum":
"air support missions" vs "aerial bombardment")
To lend "status": ("sanitary engineer" vs "janitor, garbageman";
"senior citizen" vs "retiree")
To lend "social acceptability": ("motion discomfort bag" vs "vomit sack";
"recycling center" or "waste management center" vs "dump")
Advertising; appeals to vanity: ("husky" or "pretty-plus" sizes vs "overly large" [plump, fat] sizes), etc.
Political 'Propaganda': "the evil empire", "axis of evil", etc.
(language intended to 'demonize'aperceived opponent)
Inadvertent "technicalization" of language by engineers, sociologists, administrators, etc.
(cf. "receiving waters" or "effluent" [ofasewage treatment plant])
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ သုံးစွဲရင်း မတော်တဆ အတည်ဖြစ်သွားသောစကားများ
စကားလုံးတစ်လုံး၊ စကားစုတစ်စုကို euphemism အဖြစ်သုံးစွဲသည့်အခါ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်ထက် သာဓကဆောင်သည့်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သွားလေ့ရှိပါသည်။ euphemism ကို ခန္ဓာကိုချို့ယွင်းချက်၊ လိင်ကိစ္စ၊ သေခြင်းတရား၊ စစ်ပွဲ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာအသုံးအနှုံးများတွင် အများသူငှာ ကြားနာရန်မသင့်ဟုယူဆသည့်အခါမျိုးမှာသုံးဆွဲကြပါသည်။ တစ်ခါတလေ ကျတော့လည်း မိခင်ဘာသာစကားတွင်ရိုင်းသည့် အသုံးကို နိုင်ငံခြားဘာသာ စကားဖြင့်ပြောလိုက်သည့်အခါ ယဉ်သွားသလိုခံစားရတတ်ပါသည်။ အောက်တွင် အယဉ်သုံးစကားတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
confirmed bachelor အဓိပ္ပါယ်ရင်းကတော့ ထာဝရလူပျိုကြီးပေါ့။ အခြောက်လို့ပြောရင် တဖက်သား နာလိုခံခက်ဖြစ်နိုင်လို့ လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူလို့ ပြောသလို homosexual တွေအကြောင်းပြောခြင်တဲ့အခါမှာ confirmed bachelor လို့သုံးစွဲတတ်ပါတယ်။ adult entertainment, adult material, erotica တဲ့။ pornography လို့မပြောချင်တဲ့အခါ အပြာကား၊ အပြာစာပေ ပြောသလိုပေါ့။ Intimate, make love to, making out, hooking up, sleeping with မြန်မာမှာလည်း လိင်ဆက်ဆံတယ် have sex လို့သုံးရမှာနည်းနည်းကြမ်းသလိုဖြစ်နေတော့ ချစ်တင်းနှောတယ်၊ ချစ်ဗျူဟာခင်းတယ် လို့ပြောလေ့ရှိတယ်မဟုတ်လား။
လူတစ်ယောက်သေသွားပြီလို့ပြောတဲ့အခါ တိုက်ရိုက်ကျလွန်းတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း အယူသီးမှုတွေရှိတတ်တယ်။ ဒီတော့ အနိစ္စရောက်တယ်၊ ကွယ်လွန်တယ်၊ ဆုံးသွားတယ် လို့သုံးသလို passed away, asleep with Jesus ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်ခြင်း၊ breathe one's last , ထာဝရအိပ်စက်အနားယူတယ် rest in peace လို့အမျိုးမျိုးသုံးနိုင်ပါတယ်။ kick the bucket လို့လည်းသုံးနိုင်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားမျိုးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြိုးစွဲချ သတ်သေတဲ့အခါ မှောက်ထားတဲ့ပုံးပေါ်တက်၊ လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး ပုံးကိုကန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ကိစ္စပြီးသွားတယ် ဆိုတဲ့နောက်ခံအကြောင်းလေးကနေလာပါတယ်တဲ့။
စစ်တပ်အတွင်းသုံးစွဲသည့် euphemism တွေကလည်းအများကြီးရှိသည်။
“Take Out" – Destroy ဖျက်စီးသည်။ ချေမှုန်းသည်။
“Area Denial Munitions” - Land Mines မိုင်းကွင်း။
“Physical Persuasion/Tough Questioning” – Torture နှိပ်စက်ညှင်းပန်းသည်။
“Department of Defense" - Department of War ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
“Neutralize" – Kill သတ်ဖြတ်သည်။
“Collateral Damage" - Civilian Deaths အရပ်သားသေဆုံးမှု
“Ethnic Cleansing" – Genocide မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း
“Generous Offer" - Demand for Surrender လက်နက်ချခိုင်းသည်
Friendly Fire" - Death caused to one's own troops အချင်းချင်းမှားပစ်မိသည်။
"Nerve agent" - Poison gas အဆိပ်ငွေ့
တစ်ချို့အလုပ်အကိုင်တွေရဲ့နံမည်ကိုတပ်ပြီးခေါ်ရင်ရိုင်းတတ်လို့ ယဉ်အောင်လုပ်ယူရပါတယ်။ အမှိုက်သိမ်းတဲ့လူ ကို အမှိုက်ကောက်သမားလို့မခေါ်ချင်တော့ အင်္ဂလန်မှာစွန့်ပစ္စည်းရှင်းလင်းရေးအရာရှိ Waste Removal Officer တဲ့။ အမေရိကားမှာတော့ ရေသန့်အင်ဂျင်နီယာ Sanitation Engineer လို့ပြောပြန်ရော။ စာသင်ချိန်မှာ မူလဆရာမလာနိုင်လို့ အစားဝင်တဲ့ဆရာကိုကျတော့ Substitute Teacher လို့ပြောတာတဲ့ဒိုးနိုင်လွန်းလို့ Teacher on Call, Guest Teacher လို့ပြောကြပါတယ်။ လေယဉ်မယ်တွေကိုခေါ်တဲ့ မူလအသုံးက stewardess ဖြစ်ပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ Flight attendant ဆိုတဲ့အသုံးကတွင်ကျယ်နေပါပြီ။ ပြည့်တန်ဆာ ဆိုတဲ့စကားဟာ ဗမာစကားမှာလည်း အယဉ်သုံးထားတာပေါ့။ ဒီလိုပဲအင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်း Business Girl, Call girl, Comfort woman , Commercial pleasure worker ,Commercial sex worker,Courtesan, Escort, Fallen woman , Fille de joie, Full-body masseuse ,Hooker ,Lady of negotiable affections, Lady of the night, Night workers, One night wife, 'Professional', လို့အမျိုးမျိုးထွင်ပြောကြပါတယ်။
အထက်ပါ euphemism များတွင် နေ့စဉ်သုံးစွဲရာတွင် ပြောသည့် စကားလုံးများပါသလို စာအရေးအသား၊ သို့မဟုတ် ထူးခြားသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်တွင်မှ အသုံးပြုသည့်စကားလုံးများလည်းပါရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲတော့မည်ဆိုပါက သေချာအောင်အရင် အင်တာနက်မှာသူများတွေဘယ်လိုသုံးထားသလဲ ဆိုတာ လေ့လာပြီးမှ သုံးစွဲကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on October 17, 2011 at 17:11
မှန်၏ ။ လက်ခံပါ၏ အကိုဇာနည်ရေ
တစ်ချို့ C.V Form, Personal Information တွေမှာ ယောက်ျား၊ မိန်းမကို ဒီလိုရေးကြတာတွေ့ရတယ်။ Sex = male (သို့) Female လို့ရေးကြတယ်။ ဖတ်တဲ့သူအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူး။ C.V Form တွေမှာ အများအားဖြင့်အဲ့လိုမြင်တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီထက် ပိုယဉ်ကျေးတဲ့စကားလုံး အနေဖြင့် Sex အစား Gender ကိုသုံးတာပိုသင့်တော်မယ်လို့  ကျနေ်ာထင်မြင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Kyaw Kyaw Aung on October 18, 2011 at 11:09
Permalink Reply by ashineindawbarsa on October 18, 2011 at 11:22
အခုလို အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနုန်းတွေ မျဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်
Permalink Reply by saw gerald on October 19, 2011 at 17:04
မေးပုံက..ဖုန်းကြီးကစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ပြီး..၀ှါ့.စ.အင.့်စ.သှစ်.စ(What is this) မေးတော့ကျောင်းသားက.သှစ့််စအေဘွတ်ခလို့(This isabook) လို့ပြန်ဖြေလိုက်တော့..ဖုန်းဖုန်းက..ဂွတ်ထ..ဂွတ်ထ.(Good ,good)ဆိုတာလိုမျိုးမဖြစ်စေရန်သတိထားပြီးအနီးဆုံးဖြစ်အောင်(accent & fluency) ကိုပါအလေးထားပါရန်အကြံပြုလိုပါသည်..
Permalink Reply by khon lin aung on October 24, 2011 at 3:16
U should check your Myanmar writing, friend.Really, you should understand him because he is just sending and sharing his knowledge.Do u think your Myanmar writing is also right? Check again to infinity, CHITNYILAY..The point you should is KO ZAR NI should be appreciated because he is clever than you, CHITNYILAY.. Sp you should be called BARKING DOG.Don't forget to check your writing, too.
Permalink Reply by khon lin aung on November 11, 2011 at 0:40
Thank for your sharing. But, don't forget this is British Council Website. Your copy is more suitable for Myanmarsar Development Website. After u have commented others, why u delete your comment? U dare not show ..... This is comment rule. I think you will know this. By the way, if you think you are right, why you don't add your photo. This website is just for improving English. You have forgotten the goals and objectives of Myanmar Network.
Permalink Reply by 2i6hw7wdatosh on November 12, 2011 at 18:21
I want to request both of you.
Let stop ours argument . This problem is not my fault .Also it is not your fault.
The main point is misunderstanding between us.we postalot of comment each other.Like that we comment each other ,it can be never stop.It is heading to the infinity.So i want to request both of you that is stop ours argument here.It is useless for us.I wanna peace with both of you.
That is why i delete all of my comments today.I also request both you, Would you don't mind Please delete yours comments that is concern with this argument.Because it was ugly for this page.I think both of you are gentlemen. So,I hope you will accept my request.if everything is OK. i can delete also this comment at tomorrow evening when i came to this website.Thanks your so much.So sorry for everything.
Permalink Reply by Bruce on November 13, 2011 at 6:56
It is alright that we argue.Please do not feel sorry about the matter.I have learnt something from your article.There are some positive outcome for my data base.(Brain)
I thank you for sharing your knowledge.
Permalink Reply by khon lin aung on October 25, 2011 at 11:31
Permalink Reply by Bruce on October 31, 2011 at 7:50
Hi,Khon Lin Aung
Thank you for your support.He wants us to check up his profile.He is using the strategy to attack the popular person to draw the same attention to him.
Permalink Reply by u myo aung on October 18, 2011 at 14:43
Very informative & please keep up your good work in helping our learners of English.
Permalink Reply by Queen on October 19, 2011 at 11:05
ကျေးဇူးပါနော် အခုမှမှသေချာသိတော့တယ်း)